February 3, 2020 - CeleLove
အရမ်း တန်ဖိုးရှိလို့ မျှဝေပါတယ် ရှယ်ယူပြီး မိမိဖုန်းထဲမှာ သိမ်းထားပါ…
အရမ်း တန်ဖိုးရှိလို့ မျှဝေပါတယ် ရှယ်ယူပြီး မိမိဖုန်းထဲမှာ သိမ်းထားပါ… စာဖတ်သူ ဓမ္မမိတ်ဆွေများ အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ဆရာတော်ဘုရားများ ဟောပြ လမ်းညွှန် ထားသော တရား တော်များမှ အသိဉာဏ် ဗဟုသုတနှင့် ကုသိုလ် တရားများ စဉ်ဆက်မပြတ် တိုးပွားစေရန် နေ့စဉ် ဓမ္မအကြောင်းရာလေးတွေ မျှဝေ […]
၁၄ နှစ်အရွယ် သမီးအရင်းအား ဖခင်ဖြစ်သူက အဓမ္မပြုကျင့်မှုဖြစ်ပွား
၁၄ နှစ်အရွယ် သမီးအရင်းအား ဖခင်ဖြစ်သူက အဓမ္မပြုကျင့်မှုဖြစ်ပွား ဖခင်ဖြစ်သူက ၁၄ နှစ်အရွယ်သမီးအရင်းအား အဓမ္မပြုကျင့်မှု ကောလင်းမြို့၌ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ ဖြစ်စဉ်မှာ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကောလင်းမြို့နယ်၊ ပုတောကလုံးကျေးရွာနေ မ——-၊ ၁၄ နှစ်သည် အမြဲဆိုသလို မှိုင်တွေနေပြီးမူးဝေအော့အန်နေသည်ကို အဒေါ်ဖြစ်သူကသတိထားမိသဖြင့် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂ ရက်၊ နံနက် […]
လမ်းဘေးမှာရပ်ခဲ့တဲ့ကားထဲ ဝင်ခိုးနေတဲ့ အမျိုးသမီးကို လက်ပူးလက်ကျပ်မိခဲ့တဲ့အဖြစ်
လမ်းဘေးမှာရပ်ခဲ့တဲ့ကားထဲ ဝင်ခိုးနေတဲ့ အမျိုးသမီးကို လက်ပူးလက်ကျပ်မိခဲ့တဲ့အဖြစ် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဘန်ကောက်မြို့မှာနေထိုင်တဲ့ ကန်ဆူဝမ် ဆိုသူ အမျိုးသား ဟာ တစ်ရက်မှာတော့ သူ့ရဲ့ ကလေး(၃)ယောက်နဲ့အတူ ဈေးဝယ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ် …။ စူပါမားကက် တစ်ခုနားအရောက်မှာတော့ သူက ဝယ်စရာ တစ်ခုရှိနေတာကို သတိရလိုက်မိပြီး ကလေးတွေကို ကားထဲမှာ ထားခဲ့ကာ စူပါမားကက်ထဲ […]
နာနာကျင်ကျင်အသည်းကွဲပြီးနောက် အချစ်သစ်ကို ဘယ်အချိန်မှပြန်စသင့်သလဲ
နာနာကျင်ကျင်အသည်းကွဲပြီးနောက် အချစ်သစ်ကို ဘယ်အချိန်မှပြန်စသင့်သလဲ အသည်းကွဲနေတဲ့သူအများစုဟာ သူတို့ရဲ့နာကျင်မှုတွေကို ကုစားဖို့အတွက် အချစ်သစ်တစ်ခုအမြန်ဆုံးရှာဖွေတတ်ကြပါတယ် ။ဒါပေမယ့် စိတ်ပညာရှင်တွေကတော့ အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိ တစ်ယောက်ထဲနေပြီးတော့ အချစ်သစ်တစ်ခုစဖို့ ဆုံးဖြတ်သင့်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်။ဒါဆို ဘယ်လိုအခြေအနေရောက်မှ အချစ်သစ်တစ်ခုပြန်စသင့်သလဲ …? (1) အတိတ်ကိုတွေးပြီး ပူဆွေးမနေတော့အခါ… အတွေးထဲမှာ အဆက်ဟောင်းနဲ့ခံစားခဲ့ဖူးတဲ့ ပျော်စရာတွေ ၊ ဝမ်းနည်းစရာတွေကို တွေးတွေးပြီး […]
” မလှူနိုင်ရင်တောင်မှ ကိုရင်လေးအတွက် သာသနာတော်အတွက် ရှယ်ပေးကြပါ ”
” မလှူနိုင်ရင်တောင်မှ ကိုရင်လေးအတွက် သာသနာတော်အတွက် ရှယ်ပေးကြပါ ” စာတော်တဲ့ ကိုရင်လေးပါ။တတ်နိုင်ရင် လှူဒါန်းပေးကြပါ …။ နှလုံးအဆို့ရှင်မှာ သွေးခဲနေလို့ အသက်ဆုံးရှုံးခါနီး ဖြစ်နေတဲ့ ကိုရင်လေးပါ …။ ကိုရင်လေးရဲ့ မိဘများ၏ ပုံရိပ်တွေကလည်း အရမ်းအားငယ်ပြီး ရင်ဆို့ကာ စိတ်မကောင်း အတော်ဖြစ်နေဟန်ပါ …။ ကိုရင်ဘွဲ့တော်က […]
ဗိုလ်ချုပ်ပုံပါ ၁၀၀၀ တန် အသစ်ကို သုံးစွဲလို့မရတော့ပါ …
ဗိုလ်ချုပ်ပုံပါ ၁၀၀၀ တန် အသစ်ကို သုံးစွဲလို့မရတော့ပါ … ကျွန်တော့်နာမည် လှိုင်ဝင်းထွန်းပါ မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့နယ် မြင်းကကုန်းကျေးရွာမှာနေပါတယ်။ယနေ့ညနေ ၅နာရီခန့်အချိန်တွင် ကျွန်တော်မိသားစုနှင့်အတူ အိမ်အတွက်လိုအပ်သောဆန်ဝယ်ရန် ငွေစံပါယ် ဆန်စက်သို့ ဆန်သွားဝယ်ခဲ့ပါတယ် …။ ဆန်အိတ်တန်ဖိုးမှာ ၃၂၀၀၀ ကျ၍ မိမိမှာပါလာသော ၅ထောင်တန် ၆ရွက် ၁၀၀၀ တန် […]
မုန်လာဥနီ ဖျော်ရည်ကို (၈) လ ဆက်တိုက် စွဲစွဲ မြဲမြဲ သောက်ပြီးတဲ့နောက် ကြုံတွေ့ ခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်အပျက်
မုန်လာဥနီ ဖျော်ရည်ကို (၈) လ ဆက်တိုက် စွဲစွဲ မြဲမြဲ သောက်ပြီးတဲ့နောက် ကြုံတွေ့ ခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်အပျက် ၈ လ ဆက်တိုက် မုန်လာဥနီ ဖျော်ရည်ကို စွဲစွဲ မြဲမြဲ သောက်ပြီးတဲ့နောက် ကြုံတွေ့ ခဲ့ရတဲ့ မယုံနိုင်စရာ အဖြစ်အပျက်တစ်ခုပါ …။ ကလေးစာပေတွေကို […]
အရပ်ပုတဲ့သူတွေအတွက် သတင်းကောင်း လာပါပြီ…
အရပ်ပုတဲ့သူတွေအတွက် သတင်းကောင်း လာပါပြီ… အရပ်ပုတဲ့သူတွေအတွက် ဆွဲဆန့်လို့ရနေပါပြီနော် …။ အရပ်ပုလို့ စိတ်ညစ်နေပီလား? စိတ်မညစ်ပါနဲ့ ငွေသာရှိပါစေ …။ အရပ်ရှည်ချင်လို့ရပါပီ …။ ထိုင်းနိုင်ငံက အရပ်ရှည်အောင်ခြေထောက်ဆွဲဆန့်တာတဲ့5’7″ to 5’10″ထိ ရှည်လာပါတယ်တဲ့ …။ အရပ်ပုတဲ့သူတွေအတွက် ဆွဲဆန့်လို့ရနေပြီနော် …။ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာ အရပ်ပုတဲ့သူရှိရင်လဲ လက်တို့ပီး […]
ဓမ္မတာလာတဲ့အချိန် အလွန်အမင်းနာကျင်ကိုက်ခဲတဲ့သူတွေအတွက် အကြံပေးချက်များ…
ဓမ္မတာလာတဲ့အချိန် အလွန်အမင်းနာကျင်ကိုက်ခဲတဲ့သူတွေအတွက် အကြံပေးချက်များ… လစဉ်လတိုင်း မိန်းကလေးတွေ စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်ရတဲ့အရာတစ်ခုကတော့ ဓမ္မတာလာခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေမှာ ဘာကြောင့် ယောင်္ကျားလေးတွေကျ ဒီလို ဒုက္ခမျိုး မခံစားရလဲလို့ တွေးမိတဲ့အထိ စိတ်ပျက်တတ်ကြပါတယ်။ မိန်းကလေးဖြစ်တာချင်း တူနေပေမဲ့လည်း ဓမ္မတာလာတဲ့အချိန် နာကျင်ကြတာ မတူကြပါဘူး။ တစ်ချို့ကတော့ ဓမ္မတာလာမှန်းတောင် မသိတတ်ကြသလို […]